Madaxweyne Xasan sheekh oo Balanqadyo Cajiib ah u sameyeey Xoolo dhaqatada dalka. – idalenews.com
Madaxweyne Xasan sheekh oo Balanqadyo Cajiib ah u sameyeey Xoolo dhaqatada dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe soo xiray shir mudo 4 maalmood uga socday magaalada muqdisho xubno kala duwan oo ay ku jiraan masuuliyiin iyo quburo ku xeel dheer xanaaneynta Xoolaha.
Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ay muhiimadu tahay in kor loo qaado horumarinta xanaaneynta xoolaha Soomaaliyeed ayna dowladiisu ku dadaali doonto sidii ay horumar u gaarsiin laheyd.
Waxa uu balan qaadyo balaaran u sameeyay xoola dhaqatada Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan isagoo sheegay in uu ka saacidi doono caqabadaha soo food saara iyagana looga baahan yahay in ay dhiiragelin sameeyaan Samir iyo u dulqaadashada burburka sanadaha badan ee Soomaaliya ku habsatay.